Manome Vahaolana Azo Tsapain-tànana Ireo Fikambanana Manoloana Ny Herisetra Anaty Fitaovam-pitaterana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2016 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, Ελληνικά, Français
Dikasary nalaina tao amin'ilay fampiharana Hé izay mampiaina ny herisetra eny an-dàlambe
Tanatinà fanadihadiana nataon'olona tsy matianina izay mirakitra valinteny maherin'ny 5200 mandrak'androany, 94% an'ireo olona no nanambara fa efa niharanà herisetra teny an-dàlambe. Tsy vaovao ny sehon'ny herisetra anaty fitaovam-pitaterana, izay fandraisana ny vehivavy ho zavatra eo amin'ny lafiny ara-nofo eny amin'ireny sehatra ho an'ny besinimaro ireny. Ny tanjona dia ny hanome vahaolana mahomby ho an'ireo izay iharanà fihetsika maherisetra tahaka izany.
Mitantara ny fomba namaranany trangan-javatra nifono herisetra mety ho nampidi-doza tanatinà metro i Vincent Lahouze, mpanakanto iray:
Nitodika tany amin'ny fitaratra ny tarehin'ilay vehivavy, toa tsy nahetsika izy. Nanatona ihany aho, mba hihaino ny zavatra nolazain'ilay lehilahy azy, izay nipetaka taminy. (tena io, holeleko tena, oh ie holeleko mafy mihitsy tena ary ho tian-tena izany an, mazava ho azy fa ho tian-tena mmh eh, henoy ‘zay lazaiko ry ‘lay makorelina kely ‘ty ah, fantatro fa tian-tena izany hitako tamin'ny fijerin-tena ohatran'ny alikavavy te-hanao, tsy tokony nanao zipo tena raha tsy liana, ie tena io holeleko tena) Tsy niteny ilay zatovovavy, nifantoka tamin'ny tàrany ny fijeriny, tsy nitsiky izy, tsy nahetsika. [..] Tena mahavariana ny tsy fahafahantsika mihetsika noho ny tahotra amin'ireny fotoana ireny, mba marina.
Kanefa, nipetraka teo akaikin-dry zareo aho sady nampifanojo ny fijeriko tamin'ny an-drazazavavy, nilaza taminy aho hoe, Eh Camille! Elaela ihany izay tsy nahitako anao izay an! Manao ahoana ianao ranabaviko? avy eo nitodika tany amin'ilay lehilahy aho, ary nitafy tsiky lehibe sady niteny, antenaiko fa tsy manelingelina anareo aho? Ireo teny vitsy ireo dia ampy nampiverina ny ain'ilay zatovovavy, ary takany ny zavatra noezahako natao ka narahany aho tamin'ny tantaram-pianakaviana kely noforoniko. Nalàn'ilay lehilahy ohatran'ny tsy teo ny tànany, tahaka ny hoe tapaka teo ny tady namatotra ny saribakoliny, tahaka ny nisy nandoro izy raha vao nikitika ny hoditr'ilay zatovovavy. Tsy nijery akory izy, tonga dia nitsangana, ary nivoaka ny fiarandalamby sady tsy nitodika mihitsy.
Iray amin'ireo vahaolana mahomby atolotry ny Tetikasa Crocodile (Tetikasa Mamba), ny tetikasa Paye Ta Shneck (Vidio ny Kindinao) sy ireo Fikambanana hafa Tsy Miankina tahaka ny Stop Harcèlement de Rue (Aoka izay ny Herisetra an-dàlambe), ity tetika fandrebirebena ity. Ito ambany ito misy petadrindrina avy ao amin'ny Stop Harcèlement de Rue izay manazava ny fomba hamaranana ny herisetra raha toa ka iharan'izany ianao:
Taratasy zaraina mirakitra vahaolana manoloana ny herisetra an-dàlambe
Mazava ho azy fa erantany io olana io ary misy ireo tetikasa maro mitovitovy amin'izany natao hanakanana ny loza any Amerika Avaratra, Azia Atsimo, Afrika ary ireo faritra hafa.
Mba handanjàna ny fivalamparan'ilay olana, tsy eo amin'ny tsy fisian'ny paikady fanaraha-maso namafisina fotsiny ihany no itoeran'ny fahasarotan-javatra, fa koa eo amin'ny famaritana ny atao hoe hetsika mifono herisetra. Na eo aza izany, tamin'ny fanontaniana hoe “Efa niharan'ny herisetra ve ianao?” dia 6 % tamin'ireo olona nametrahana io fanontaniana io ihany no namaly hoe “Tsy mbola, hatramin'izay”. Tamin'ny fanontaniana mikasika ny fiverimberenan'ilay herisetra, 32% no namaly: indray mandeha na imbetsaka ao anatin'ny herinandro:
Salanisan'ireo olona niharanà herisetra – avy ao amin'ny fanadihadiana Google
Nisy fanadihadiana iray hafa nataon'ny Fikambanana Thomson Reuters manambara fa 85 % -n'ireo vehivavy no mieritreritra fa tsy hisy hanampy azy ireo na dia misy manao herisetra aminy aza ao anatin'ny metro. Avy amin'io fanadihadiana io, 41% -n'ireo vehivavy no nilaza ho efa niharanà herisetra ara-batana (tànana mipetaka amin'ny vody, kitikitika, fanolanana).
Tamin'ny 2015, nametraka tetikasa fiadiana amin'ireo herisetra fanavakavahana ara-nofo miseho eny an-dàlambe ny governemanta. Nalefa ny hetsi-panentanana ho “fanalalahana ny teny manoloana io fotodresaka io”, isan'izany ireo dokambarotra an-tsary tahaka ity iray ity:
Manazava ny antony nahatonga ny governemanta hametraka io paikady io ny sekreteram-panjakana misahana ny Zon'ny vehivavy:
Tokony mahay mihetsika ny tsirairay manoloana ireo trangan-javatra tsy azo ekena. Mieritreritra ny fomba hahafahan'ireo teknôlôjia vaovao manampy ireo mpandeha voaelingelina sy ireo vavolombelona hampandre am-pahamalinana ny manampahefana ihany koa izahay, tahaka ny someso na amin'ny alalanà fampiharana voatokana ho amin'izany. Saingy ny tena lehibe, ho ahy, dia ny fampahatsiarovan-tena an'ireo vehivavy momba ny zony.
Raha te-hahita loharano hafa momba ny ady amin'ny herisetra dia hitanao eto sy eto ireo fitaovana ho amin'izany.